🥇 ▷ IPadkan cusub ee 11 wuxuu maamuli doonaa soo bandhigida Apple ✅
IPadkan cusub ee 11 wuxuu maamuli doonaa soo bandhigida Apple
Apple Wuxuu sugi jiray bilooyin si uu naftiisa ugu soo celiyo isbadal la’aan soo wajahday kuwii hore ee iPhone XS iyo XS Max, laakiin sugitaanku wuxuu ku dhammaaday qaybta dambe ee ay ku bixin doonaan heshiisyadeeda caymiska. Tim Cook wuxuu sameeyay dareenkoo dhan si uu dunida u muujiyo taxanaha cusub ee iPhone 11.
The iPhone 11 ayaa loo soo bandhigay sida ku guuleystaha iPhone XR ee caanka ah iyo aasaaska qaabka taxanaha. The Soo bandhigida Liitida Retina LCD Waxay leedahay cabir ahaan 6.1 inji iyo qaraarka 1792 x 828 pixels, oo ay weheliso maqal maqal ah oo siinaya dareen weyn oo ah bilowga markii aad ku raaxeysatid waxyaabaha ku duuban warbaahinta telefishanka. Wadnaha iPhone 11 waa processor cusub A13 Bionic, guntinta ugu dhaqsaha badan uguna awoodda badan ee loogu talagalay shirkadda, oo sheegta inay aad uga dhakhso badan tahay tartanka loo yaqaan ‘Snapdragons’.
Cilmiga cusub wuxuu kaloo dhex maraa nidaamka laba kamarad hortiisa midka kaliya ee soo bandhigay iPhone XR. Hadda waxaan haysannaa a 12MP dareeraha ugu weyn leh furitaanka f / 1.8, halka qalabka labaad waa xagal ballaaran iyadoo qaraarka ah 12MP Y 120º aragti aragtiyeed si loo helo aragti weyn oo aan ku sawirno. Kaameerada hore waxay leedahay nidaamka TrueDepth qoto dheer iyo sawirro leh xalka 12MP, kaas oo ay iyagu ku darsadeen habka mooshinka gaabis ah.
Qiimaha iPhone 11 wuxuu ka bilaaban doonaa 809 euro oo loogu talagalay nooca 4GB ee RAM iyo 64GB ee xusuusta gudaha, 859 euro oo ah 128GB kaydinta iyo 979 euro haddii aan rabno dusha sare 256GB.